Filoham-pirenena mivady Nandao an-tsokosoko an�i Madagasikara
Ny seraseran�ny fiadidiana prezidansa no tsy mahay sa misy zavatra hafahafa hataon�ny filoha mivady ka na ny mpiara-miasa akaiky aza tsy ampahafantarina ny dia aleha ? Fantatra mantsy fa nanomboka ny sabotsy alina teo no efa tsy teto Madagasikara ny filoha mivady.
Lasa any ivelany nandray ny zotra Air France izy ireo ary azo antoka fa nihazo an’i Paris. Tsy nisy ny fampitam-baovao ofisialy fa ny fikaroham-baovao no nahalalana azy. Ny hany fantatra dia hoe hiatrika ny Kaonferansa iraisam-pirenena momba ny fiarovana ny tontolo iainana (COP 22) any Maraoka ny filoha rahampitso alarobia 16 novambra. Ny mahagaga anefa dia io nandeha aloha be io kanefa tsy nisy ny fampahafantarana. Inona intsony no maha raiamandrenin’ny Malagasy ny filoha mivady raha ny fivoahany any ivelany izay handaniana volam-bahoaka aza tsy ampahafantarina akory ? Inona no asa atao any Frantsa ? Sa dia miliba sy mitsangantsangana fotsiny ? Malaza amin’ny fanaovana rendrarendra sy sitrapo ny filoha mivady ka maro no miteny fa mbola lasa niantsena any an-toerana toy ny mahazatra izy ireo. Maro ny zanaka Malagasy tsy miditra an-tsekoly, maro ny tsy manan-kialofana, maro ny miandry fahafatesana eny amin’ny hopitaly … Mbola mahavita mitsangantsangana sy mandany volam-bahoaka fahatany anefa ny mpitondra tarihin’ny filoha izay mihevitra ny mbola hijanona amin’ny toerany. Efa fahagagana raha izany no mbola ho lany ihany !